Triptorelin Acetate tsindrona / vovoka: Aiza no ahitako azy? - Phcoker
Triptorelin Acetate koa dia fantatra amin'ny anarana hoe Triptorelin Acetate140194-24-7 dia molekiola biolojika biolojika misy solon-tsolika ambaratonga faharoa sy fahatelo amin'ny atôma karbonika afovoany, amin'ny teny tsotra dia midika izany fa misy atôma metaly maro, vondrona miasa mifamatotra amin'ny karbaona. atôma amin'ny firafitry ny simika. Amin'ny ankapobeny dia ny hoe 'Organic', ny tiana hambara dia ny molekiola manana atômanina karbonika ho atôma afovoany. Ny fitambarana biolojika rehetra dia misy ny atoma karbaona ary izany no mahatonga ny karbonina ho lakilen'ny fiainana.
Ny Triptorelin Acetate dia ampiasaina matetika ho toy ny zava-mahadomelina ary koa ho an'ny fampiasana simika ao amin'ny laboratoara. Ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia tena zava-dehibe indrindra. Ny Acetate Triptorelin dia mora miteraka ary manana farafahakeliny mpitrandraka ambany kokoa izy raha ampitahaina amin'ny tahan'ny akoan'ny rano. Manana fehezan-tsimika ao amin'ny C66H86N18O15 ary volavolan-taolam-pampandrosoana 1311.49 isam-bolana. Ireo mpivarotra na mpidoroka zava-mahadomelina koa dia mety mampiasa ny teny hoe decapeptyl, gonapeptyl, sns, izay midika hoe Triptorelin Acetate. The fampiasana Triptorelin Acetate eo amin'izao tontolo izao dia malaza, Ny fanafody dia ampiasaina hitsaboana homamiadan'ny prostaty mandroso (Manondro ny fihary endocrine ao amin'ny rafitry ny fiterahana lahy amin'ny vatan'olombelona). Tsy ny homamiadana ihany fa ny ampiasaina amin'ny dingana mandroso amin'ny fifehezana ny hormonina, ny fifehezana testosterone sns Fantatra ny fampiasana Triptorelin Acetate na Triptorelin Injection, mety ho tena ilaina tokoa izy io amin'izao tontolo izao. Ny mpamokatra Triptorelin Acetate dia manolotra ihany koa fa tsy maintsy mandray ny hevitry ny dokotera alohan'ny hihinanana fanafody ianao.
Triptorelin Acetate koa dia ampiasaina hanasitranana ny homamiadan'ny nono amin'ny vehivavy. Zavatra iray tokony homarihina fa ny tsindrona Triptorelin Acetate dia tsy hanaisotra samirery ireo sela mararin'ny homamiadana, mampihena ny fitomboan'ny hormona izany ka mijanona tsy miparitaka ao anaty vatan'olombelona ireo sela mararin'ny homamiadana, io dia fanasitranana ihany izay indraindray dia misy valiny miadana tokoa. Aza adino ny maka fizaham-pahasalamana ara-pahasalamana amin'ny vatanao matetika amin'ny fotoana fampiasana ny fanafody ary ny karazana tsy fetezana tsy ara-dalàna dia tsy maintsy taterina amin'ny dokotera alohan'ny hihomboany ary hanehoana fiatraikany ratsy.
Ny tsindrona dia manomboka ny asany amin'ny alàlan'ny lalan-drà ary mampihena ny hormonina mandrisika ny fitomboana toy ny testosterone sns. Ny hetsika mikraobazy amin'ny hormonina sy ireo taova mamoaka hormonina dia mety tsy dia mampidi-doza loatra fa miankina amin'ny fatran'ny fanafody sy ny tsimatimanota ihany. ny zanak'olombelona. Amin'ny ankapobeny, ny doka iray dia tsy mampiseho ny valiny fa ny fatra manokana atolotry ny dokoteranao dia hanampy amin'ny fitsipi-pitomboana.
Triptorelin Acetate (140194-24-7) dia ampiasaina amin'ny fitsaboana homamiadana (homamiadan'ny prostaty) sy ny fitomboan'ny fifehezana ny hormona. Ny fanafody Triptorelin Acetate dia omen'ny dokotera anao ho toy ny tsindrona, matetika, ny tsindrona dia indray mandeha isaky ny 4-herinandro (mety tsy mitovy amin'ny toe-pahasalamanao sy ny tsimatimanota anao). Tsy maintsy mitandrina ianao amin'ny fatra mba hisorohana ny voka-dratsiny tsy ilaina. Ho tombontsoanao dia manoro hevitra aho ny hanisy marika ny datyo amin'ny kalandrie ary raiso tsindraindray ny tsindrona Triptorelin Acetate amin'ny fatra mety ho an'ny vokatra tsara indrindra. Ny fanakanana ny urinary no famantarana mahazatra ny zavona rehefa mampiasa an'io fanafody io. Amin'ity tranga ity dia tokony manatona ny dokotera ianao ary tokony hiara-miasa amin'izany amin'ny fandrindrana anao. Na izany na tsy izany, ho an'ny tapa-bolana voalohany ihany io. Matetika ny tsy fahatsapana, ny fanaintainan'ny taolana dia mety ho soritr'aretina kely hafa amin'ity fampiasana zava-mahadomelina ity fa tsy maintsy milaza amin'ny dokotera ianao raha mitombo ny fanaintainany. na dia tsy misy aza ny voka-dratsin'ny loza mampidi-doza, tsy misy maharatsy ny miandany amin'ny lafiny azo antoka raha mbola manandrana fanafody vaovao. Aza matahotra koa, mandeha tsara aminao io fanafody io ary manohana anao foana ny dokoteranao. Na oviana na oviana mandritra ny vanim-potoana fitsaboana, aza misalasala mifandray amin'ny dokotera momba ny olana rehetra momba ny fanafody. Ny famaritana dia ho faritan'ny manam-pahaizana manokana aminao ary izaho dia manoro hevitra anao tsara mba tsy hanelingelina ny iray amin'ireo doka na vanim-potoanan'ny fanafody.
Ny ankamaroan'ny Triptorelin Acetate dia ampiasain'ny olona mijaly noho ny homamiadan'ny prostaty na ny olana eo amin'ny fitomboana. Tokony ho fantatr'izy ireo fa ny aretina dia azo sitranina rehefa tonga ara-potoana amin'ny fanafody izy ireo. Tsy maintsy manatona dokotera / manam-pahaizana manokana momba ny voka-dratsy na soritr'aretina izy ireo indraindray, indraindray ny voka-dratsin'ny olona tsy raharahiana indrindra dia mety hitera-doza. Ireo zavatra ireo dia tsy maintsy karakaraina alohan'ny hampiasana an'io fanafody io ho toy ny fanafody. Tokony hotadidin'ny marary ihany koa fa ny tsindrona Triptorelin Acetate dia tsy hanaisotra ny homamiadana rehetra indray mandeha indray mandeha, mijanona fotsiny ireo hormona izay manakana ny fitomboan'ny sela homamiadana. Ity fanafody ity dia tsy mamono homamiadana ao amin'ny vatanao; Manasitrana amin'ny fomba miadana sy maharitra izy amin'ny tsy famelana azy hitombo. Tokony hikaroka koa ianao Triptorelin Acetate fanamarinana. Na dia misy prescribed aza, dia tsy misy maharatsy ny fitadiavana ny valin'ny Triptorelin Acetate ao amin'ny aterineto.
Triptorelin Acetate dia mety aminao raha mijaly amin'ny olana hormonina ianao. Triptorelin Acetate dia azon'ny olona manana olana afa-tsy ireo vehivavy bevohoka. Ankoatr'izay, mila maka ny hevitry ny dokoteranao ianao handinihana ireo fanafody satria mety ho fantany tsara ny momba ny vatanao. Ny olana mifandraika amin'ny fitsaboana dia tsy maintsy resahina amin'ny dokotera aloha ary aza mampitaha ny tenanao amin'ny zavatra hafa mandeha amin'ny fanafody mitovy, mety samy manana ny tsimatimanota sy ny fahazarana misakafo ianao, tsy mitovy ny tsirairay. Ny Triptorelin Acetate dia miteraka fanasitranana, ary raha ianao no maniry izany dia mety aminao izany. Triptorelin Acetate vovoka na Trelstar, Na io aza dia mety hafangaro. Triptorelin Acetate poids dia mora kokoa noho ny fanindroany. Saingy ny vokatra dia nahitana vokatra tsara kokoa raha ampitahaina amin'ny vovony Acetate Triptorelin.
Azonao atao ny mividy Triptorelin Acetate amin'ny fivarotana zava-mahadomelina voamarina araka ny prescriptions. Afaka mitsidika sampana iray ianao Phcoker hahazoana ny Triptorelin Acetate amin'ny vidiny mirary. Zahao foana ny marika sy ny daty lany daty alohan'ny ividiananao ny Triptorelin Acetate.